मौद्रिक नीतिको समिक्षाको पर्खाइमा लगानीकर्ता, ११.६० अंक घटेर २७५७.५३ विन्दुमा नेप्से
४ अर्ब ३५ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री
मंसिर ५, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ११ दशमलव ६० अंक घटेको छ ।
यो दिन नेप्से परिसूचक २ हजार ७५७ दशमलव ५३ विन्दुमा झरेको हो । यस अवधिमा कारोबारमा आएका २२५ ओटा धितोपत्रको ७८ लाख ९४ हजार ४६८ कित्ता शेयर रू. ४ अर्ब ३५ करोड ७३ लाख ९ हजार ३१९ बराबरको कारोबार भएको छ ।
यो दिन कारोबारमा आएका ती धितोपत्रमध्ये दुई ओटा धितोपत्रको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा यो दिन १० प्रतिशतले वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.९५२ दशमलव ६० र मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य रू.१ हजार ६४४ दशमलव ८० पुगेको छ । त्यसैगरी सबैभन्दा बढी तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ४ दशमलव २१ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ६१६ मा झरेको हो । त्यसैगरी दोस्रोमा आइसीएफसी फाइनान्सको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ३ दशमलव ८९ प्रतिशतले घटेर रू. ८६५ मा झरेको छ ।
आइतवार सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री महालक्ष्मी विकास बैंकको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. ५० करोड ९९ लाख ९२ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ७४० मा बन्द भएको छ ।
कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहगत परिसूचकमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक १ दशमलव ४९ प्रतिशत र हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेसँगै समग्र नेप्से घटेको हो ।
बैंकिङ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव २८ प्रतिशत, व्यापार समूहको १ दशमलव ८७ प्रतिशत,होटल एण्ड टुरिजम समूहको १ दशमलव ५१ प्रतिशत,विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव १३ प्रतिशत,वित्त समूहको शून्य दशमलव ७२ प्रतिशत,निर्जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव ५२ प्रतिशतले घटेको छ ।
त्यसैगरी अन्य समूहको १ दशमलव ८३ प्रतिशत,लघुवित्त समूहको शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत,जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत,म्युचुअल फण्ड समूहको शून्य दशमलव २२ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसुचक शून्य दशमलव ८५ प्रतिशतले घटेको छ ।
आइतवारको बजारलाई हेर्दा लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साता मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा यहि हप्ता सार्वजनिक गर्ने भएको छ । सोही कारण पनि लगानीकर्ताहरु यति बेला मौद्रिक नीतिको समिक्षाको पर्खाइमा रहेको यो दिनको कारोबारले देखाएको छ ।
मौद्रिक नीति समिक्षामा शेयर धितो कर्जाको सिमा र सिडी रेशियोमा केही हेरफेर हुने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव बजारमा पर्नेछ । पछिल्लो समय लगानीकर्ताले दिर्घकालिन लगानीभन्दा पनि अल्पकालिन लगानी गरी छिटो नाफा बुक गर्ने गरेको जस्तो देखिएको छ । सोही कारणले गर्दा पनि बजारमा सानो करेक्सन आउने गरेको छ ।